Fampiharana maimaimpoana 3 hisorohana ny fanelingelenana any am-piasana | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | Fampiharana hafa ho an'ny Mac, maro
Mitranga amintsika rehetra matetika izany. Mipetraka eo alohan'ny solosaina izahay ary vonona ny hanomboka hiasa amin'ny tetikasa iray fa alohan'ny hahalalantsika azy dia mahita maso mailaka izahay, mijery sary vitsivitsy ao amin'ny Facebook, mamaky lahatsoratra mahaliana iray izay nampandrenesina taminay, sns. Raha fintinina, milentika amin'ny zavatra izay tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra saika hataontsika. Soa ihany fa misy ny mpamorona nahatsapa an'io ary nanao ezaka hitady vahaolana izay manampy antsika aza manelingelina amin'ny asantsika. Asehonay anao anio ny rindranasa efatra maimaimpoana izay hanampy betsaka amin'ny fisorohana ny fanelingelenana amin'ny Internet. Omeo fotoana izy ireo satria tsy misy very, afaka izy ireo, saingy be ny fotoana azo.
1 Fampiharana hialana amin'ny fanelingelenana
Fampiharana hialana amin'ny fanelingelenana
Panoply dia fampiharana izay manampy antsika hanisa ny fotoana laninay amin'ny Internet sy ny fomba andaniantsika izany fotoana izany. Suprima Venkatesano, tonian-dahatsoratry ny iPhone Life, dia nilaza fa efa an-taonany no nampiasainy ary nilaza izy fa tena nanova ny fahazarany ary nanakana azy maro fialam-boly. Ampidiro fotsiny izy ary mamoaka tatitra amin'ny antsipiriany momba ny fahamaroan'ny fampiasana tranokala sy rindranasa samihafa isan-kerinandro. Amin'ny fananana tatitra feno isan-kerinandro dia afaka miteraka fahatsapana ho meloka izany, izay mety ho antony manosika lehibe.
Ity rindrambaiko miorina amin'ny tranokala ity dia mamoaka feo ambadika hanamafisana ny famoronana sy ny fahombiazana ary aza manelingelina. Nasehon'ny fanadihadiana fa ny fihainoana ny tabataba manodidina dia afaka mampitombo isa amin'ny fitsapana miorina amin'ny famoronana. Ny tsara indrindra amin'ny Noisli? Azonao atao ny mifangaro sy mifanitsy amin'ny safidin-tsofina marobe ary mamorona playlist. Noisli manana timer koa izy io izay ho fampiroboroboana ny vokatrao.
Freedom dia rindranasa iray izay manampy anao hanakana tranokala sy rindranasa ary hampihena izany fialam-boly. Azonao atao ny mametraka azy amin'ny iPhone ary iPad tonga lafatra rehefa lasa loharano manelingelina ireo fitaovana ireo.
Mampiasa fampiharana na tetika hafa ve ianao mba hifantohana sy hisorohana ny fanelingelenana? Avelao aminay ireo hevitra narosonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Fampiharana maimaimpoana 3 hisorohana ireo fanelingelenana any am-piasana
Zavatra iray hafa miasa ny fihainoana mozika klasika. Izy io dia manalefaka ny saina ary vokatr'izany dia hamokatra bebe kokoa.